Barakacayaasha Garoowe oo lagu wacyi gelinayo faaiidada Nadaafada+Sawiro – SBC
Barakacayaasha Garoowe oo lagu wacyi gelinayo faaiidada Nadaafada+Sawiro
Posted by Webmaster on October 15, 2012 Comments
Ururka maxliga ah Tides ayaa manta dadka barkacyaasha ah ee ku dhaqan kamamka Garowe waxaa ay ku wacyi galiyeen muhiimada nadaafadu leedahay iyo sida ay muhiim u tahay in nadaafada la hagaajiyo iyo cudurada ka dhasha nadaafad darada.
Madax ka socotay wasaarada caafimadka Puntland,dowlada hoose ee degmada Garowe iyo hayada IOM ,hayda biyaha (Basawyn) iyo ururka tides ayaa ayaa barakacyaasha ku jira kaamka jowle waxaa ay ku wacyi galiyeen qiimaha nadaafada iyo in cuduro halis ah ka dhashaan nadaafad darada iyagoona socod ku soo maray wadooyinka waa wayn ee magalada Garowe.
Xili manta oo caalamku u aqoonsaday maalinta faraxalka aduunka isla markaana ay qayb ka ahayd munaasabadan xuska maaalinta faraxka aduunka isla markaana barkacyaasha lagu wacyi galinayo in ay ilaaliyaan nadaafada maadama ay yihiin dadka ugu nugul marka la eego goobaaha ay daganyihiin oo aysan hagaagasanayn n nadaafadoodu .
Cali Diiriye Siciid agaasimaha waaxda cudurada faafa ee wasaaraada caafimaadka Puntland ayaa bulshada bakacayaasha ah waxaa uu ku baraarujiyey faaiida nadaafadu leedahay waxaana uu sheegay in faradhaqashadu leedahay faaido farabadan isla markaana hadii faraha lagu dhaqdo biyo nadiif ah iyo saabuun in ay xakamayn u tahay cudurada shubanka iyo cudurada safmarka ka dhasha waxaana uu waxaana uu ku booriyey dadka barkacayaasha ah in ay hagaajiyaan nadaafada biyo nadiifana cabaan isagoo xusay in dadka barakacyaasha ah ay yihiin dadka faya dhor daro soo wajahdo waxaase uu sheegay in barkacayasah Garowe tababaro la xiriira fayadhowrka ay qaateen .
Ururka tides ayaa goobta barkacyaasha ugu qaybiyey 1000 jirgaanada biyaha lagu shubto ah kuwaas oo ay sheegeen in ay ugu talagaleen si ay gacan uga gaystaan sidii dadka barkacyaasha ah ay u helilahaayeen weel ay biyo ku shubtaan taasi oo qayb ka ah dadaalka lagu doonayo in barkacyaasha nadaafadooda la hagaajiyo .
Inkasta oo dadka bakracayaasha ay adagtahay in ay helaan fayo dhowr wanagsan iyo biyo nadiif ah marka la eego goobaha ay daganyihiin iyo duruufa nololeed ay ku suganyihiin .